यसो गर्नु भयो भने जीवन २ मिनेटमा नै सफल हुन काफी हुन्छ - ज्ञानविज्ञान
संसारमा सायदै कोहि छैन होला जो आफ्नो जीवन सफल पर्न नचाहोस । मानिस सफल या असफल हुन उसको बानि ले पनि प्रत्यक्क्ष्य भूमिका खेलेको हुन्छा । हामी कोहि कोहि सारै अल्छी हुन्छौ र सानो तिनो काम पनि भाति राख्छौ । यस्ता बानिहरु हामीलाई सामान्य लाग्छ तर यस्तो बनिहारुको कारणले हामी अघि बढ्न सकिरहेको हुदैनौ ।
आउनुहोस हेरौ केहि त्यस्ता टिप्स जसले हामीलाई अघि बढ्न मदत गर्छ ।
सजिलै सम्पन्न हुने कामलाई नसार्नुस् । सजिला काम सकिहाल्दा नियमित कामको लामो सूची छोटिन्छ । कुनै पनि काम शुरु गर्न पो गाह्रो त, सजिलो काम पहिल्यै सक्दा तपाईंलाई काम फत्ते गर्न प्रेरणा मिल्छ ।
तपाईंलाई स्वास्थ्यको माया छ भने स्वस्थ खानेकुरा खानुस् । स्याउ स्वस्थ खानेकुरा हो । यो खान दुई मिनेट पनि लाग्दैन । यसरी स्वस्थ खानेकुरा खोज्दै गर्दा यो तपाईंको राम्रो बानीका रूपमा विकास हुन्छ ।
किताब पढ्ने राम्रो बानी बसाल्नुस् । नियमित किताब पढ्नुभयो भने तपाईंलाई किताबमा रस बस्छ । दिनको एक घन्टा कम्तीमा पनि पढ्नलाई छुट्याउनुस् ।
सरल काम सिध्याउनका लागि सूची बनाइरहनु पर्दैन । सूची बनाउनुको समय तपाईं काम नै गर्नुस् न । एउटा काम सक्दा तपाईंलाई सन्तुष्टि हुन्छ र अरू काम सक्न थप प्रेरणा मिल्छ ।
कुनै काम दुई मिनेटभित्रै सकिन्छ भने गरिहाल्नुस् । यसो गर्दा तपाईंको जीवन थप राम्रो हुन्छ । पछि गरौंला भनेर नटार्नुस् । यसो गर्दा तपाईंले गजबको महसूस गर्नुहुनेछ ।
काम टार्दा त्यसले तपाईं दोषी महसूस गराइरहन्छ र तपाईं आनन्द लिन समेत पाउनुहुन्न । बाँकी रहेको काम सकिहाल्नुस् र फुर्सदको भरपूर आनन्द लिनुस् ।
घरमा जम्मा भएका फोहोर बाहिर निकालिहाल्नुस् । पछि गरौंला नि भनेर टार्नुको साटो तत्कालै फोहोर निकाल्नु ठीक हुन्छ । आखिर ढिलोचाँडो तपाईंले फोहोर फाल्नैपर्छ क्यारे, किन साइत हेरिरहने ? काम सिध्याएपछि आनन्दै आनन्द ।
Topics #जीवन २ मिनेटमा नै सफल
Don't Miss it वैवाहिक जीवनलाई सफल बनाउने टिप्स
Up Next अण्डाको बोक्राले छालालाई निकै फाइदा पुर्याउँछ, थाहा पाउनुहोस्
यस्ता छन्, कपालमा नियमित तेल लगाउँदाका फाइदा
१. नियमित रुपमा कपालको जरासम्म तेलले मसाज गरेमा कपालमा धूलो तथा फोहर जम्न पाउँदैन र प्रदूषणबाट रक्षा गर्छ । २.…
हाम्रो स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पूराउने केही कारण यस्ता छन्
१. बारम्बार अनुहारमा हात लगाउने- धेरै मानिसको बानी नै हुन्छ अनुहारमा हात दलिरहने । कतिपयले अनुहार राम्रो देखाउनका लागि समेत…